FINOANA: Raran’ny filohan’ny Fjkm ny fampiasana finday ho solon’ny baibolyLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarMALAGASY PEJY MALAGASYFINOANA: Raran’ny filohan’ny Fjkm ny fampiasana finday ho solon’ny baiboly	FINOANA: Raran’ny filohan’ny Fjkm ny fampiasana finday ho solon’ny baiboly	10/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Ny Mpitandrina Andriamahazosoa Ammi, filoha mpitantana ny FJKM ankehitriny	Categorie:	MALAGASY, PEJY MALAGASY	Hyperlien
Prisca RANJALAHY Tsy manana ny toerany any am-piangonana intsony ireo karazana finday mirakitra ny baiboly masina sy ny fihirana. Ireo mpino kristianina protestanta no niantefan’ny kabarin’Andriamahazosoa Ammi,
_Hentitra ny mpitandrina Andriamahazosoa Ammi, filoha mpitantana ny FJKM, nandritra ny lahateniny nanoloana ireo mpino protestanta teny Ilafy, tamin’ny faran’ny herinandro teo. Nolazainy fa tsy manana toerana any am-piangonana ireo karazana finday, na hamakiana andalan-tsoratra masina na hanoloana ny fihirana aza.
“Ny baiboly sy ny boky fihirana irery ihany no azo entina mivavaka sy midera an’Andriamanitra. Aoka ireo mpino FJKM noho izany mba hamela ireo fitaovan-tserasera ireo any an-tokantranony avy, ka hifantoka amin’ny fotoana natokana hivavahana marina”, hoy ny mpitandrina Andriamahazosoa Ammi.
Anton’ity antso avo ity ny fanahian’ity filohan’ny FJKM eto Madagasikara ity ny hanokafan’ireo mpiangona zavatra hafa, ankoatran’ny tokony hahatongavany any am-piangonana. Fa nofaritany ho asa fanakorontanana ihany koa ny fampiasana ireny fitaovan’ny teknolojia avo lenta ireny any am-piangonana noho ireto farany maneno lava amin’ny fotoam-pivavahana.
Ankoatra ireo fanehoan-kevitra izay mandala izany fifampitondrana vaovao eo amin’ireo samy mpino protestanta izany anefa dia, niteraka fimenomenonana izany nandritra ny andro vitsy. Ny tokony hampanarahana ny fivoaran’ny teknolojia amin’ny fiainana maha kristianina no nivoitra nanerana ireo adihevitra mahasika ity fandrarana ity. Maro mantsy ireo milaza fa “raha tsy manelingelina ny fahanginana sy ny fifantohana ary voafehin’ny mpiangona ihany koa ny findainy, tsy tokony horarana izany”.
Nitondra fanamarihana kosa anefa ny mpitandrina Andriamahazosoa Ammi fa tsy mitsipaka ny fanarahana ny teknolojia vaovao ho an’ireo kristianina. Saingy nomarihiny fa ireo boky azo raisin-tànana ihany no manana ny hasiny.
Ny finoana hafa tahaka ny finoana katolika kosa dia mifanipaka amin’ity tohan-kevitry ny filohan’ny FJKM ity. Ny Papa Ray masina François mihitsy mantsy no mandala ny fampiasana ny teknolojia vaovao hanapariahana ny tenin’ny Soratra Masina. Ary hatramin’izao, tsy mbola nandrenesana fandrarana na ho an’ireo mpanentana litorijika eny ambony ôtely aza.
Ary nanokanan’ny Papa Ray masina andro iray, faran’ny volana may, mihitsy ny toeran’ny teknolojia vaovao eo amin’ny foto-pinoana katôlika.
Partager la publication "FINOANA: Raran’ny filohan’ny Fjkm ny fampiasana finday ho solon’ny baiboly"
Contact : 034 49 701 39 | 034 11 905 26	janvier 2017